Ciidanka xasillinta ammaanka Muqdisho oo gacanta ku dhigay labo nin oo watay qoryaha AK-47 – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka xasillinta ammaanka Muqdisho oo gacanta ku dhigay labo nin oo watay qoryaha AK-47
Howlgal culus oo ay maanta ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho ka fulliyeen degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa waxay kusoo qabteen labo nin oo la sheegay inay wateen qoryo noocoodu yahay AK-47.
Nimankaasi ayaa la sheegayaa in haatan xabsiga loo taxaabay, waxaana lasoo qabtay xilli ay ku sugnaayeen guri ku yaalla degmada Waaberi, halkaas oo ay ciidanka xasillinta howlgalo baaritaan ah ka sameeyeen.
Mid mid ah dadka ku sugan degmada Waaberi oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in ciidankaasi ay howlgalada bilaabeen saakay arroortii, waxaana intii ay howlgalada socdeen la hakiyay dhamaan dhaq-dhaqaaqii ganacsi iyo isku socodkii gaadiid ee ka jiray degmadaas.
Illaa iyo haatan lama oga cidda rasmiga ah oo ay ka tirsan yihiin labadaasi nin ee lasoo qabtay.
Xiriiro kala duwan oo aynu isku daynay inaa la sameeyno saraakiisha dowladda ayaa inoo suurto-galin.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo ay ciidamada xasillinta ammaanka Muqdisho gacanta kusoo dhigaan hub iyo nimankii watay.
Tan iyo markii ay ciidanka xasillinta howlgaladda amni sugidda ka bilaabmeen magaalada Muqdisho waxaa aad u yaraaday qaraxyadda ay Al-shabaab ka geysan jiraan magaalada Muqdisho xilliga lagu guddo jiro bisha barakaysan ee Ramadaan.